Handadaad iyo cagojuglayn ay la kulmeen suxufiyiinta ka hawlgala warbaahinta Galkacyo. – Radio Daljir
Handadaad iyo cagojuglayn ay la kulmeen suxufiyiinta ka hawlgala warbaahinta Galkacyo.
Nofeembar 16, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Nov 16 – Suxufiyiin kala duwan ee ka hawlgala waraabihinta ka shaqaysa magaalada Galkayo ayaa maanta xarunta qaybta bileyska loo gaystay handadaado iyo cagojuglayn looga horistaagayo shaqooyinkooda warbaahineed.
Handadaadaan iyo cagojuglayntaan lagula kacay wariyaasha ayaa ahayd mid ay kala kulmeen ilaalada mas’uuliyiinta maamulka gobolka Mudug, kuwa magaalada Galkacyo, taliyayaasha ciidanka ammaanka iyo gaar-hayeyaal kale oo la socday mas’uuliyiin xilal ka haya gobolka, waxaana lagula kacay wariyaasha handadaad iskugu jirtay, harbin, hantaaturayn iyo hanjabaado watay cago dhul ku dhufasho, taasi oo looga horistaagay shaqooyinkii ay halkaasi u tageen, waxaana qaar ka mid ah wariyaasha lagu taagay qoryo ay ammaanku furnaayeen.
Wariyaasha maanta lagu handaday xarunta qaybta bileyska gobolka Mudug ayaa ka kala socday idaacadaha ka hawlgala magaalada Galkacyo, TV-yada iyo warbaahin kale oo iyana ka shaqaysa dalka iyo dibadaba.
Wariyaasha maanta la kulmay handadaada ayaa ahaa ku dhammaantoodu lagu casumay ka soo qayb-galka shir ammaanka ku saabsanaa oo ka dhacayey xarunta qaybta bileyska ee gobolka Mudug, kaasi oo la damacsanaa in lagu lafa guro dhacdooyinkii ammaan darro ee dhawrkii cisho ee ugu danbeeyey ka dhacay gudaha magaalada Galkacyo, waxaana casumaadda cago-juglaynta loo badalay fidiyey guddoomiye kuxigeenka gobolka Mudug Bashiir Maxamed Mire.
Suxufiyiintii goobtaasi tahay ayaa iskaga soo laabtay iyagoo ka caraysan falalka handadaada loo gaystay waxaana kulan ay isla maanta hawl-wadeenada warbaahinta Galkacyo ay iskugu yimaadeen ay ku dhaleeceeyeen falkaasi loo gaystay, waxaana maalinta berri ah loo ballamay kulan aad u ballaaran oo ay suxufiyiintu iskugu imaan doonaa, kaasi oo lagu faaqido doono tacadiyada wariyaasha loo gaysto.
Ma jiraan mas’uuliyiin ka tirsan maamulka oo si iskood ah uga hadlay dhacdaadaasi maanta. haseyeeshee guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed cali salaad oo u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegay in uu ka xun yahay falkaasi
Ma’ahan markii ugu horraysay oo fal noocaan oo kala lagula kaco wariyaasha gobolka, ee waxay markasta kala kulmaan goobaha shirarka mas’uliyiinta dhacdooyin noocaan oo kale ah.
?Burcad badeed min 10 sano oo xarig ah ay ku xukuntay maxkamada darajada 1-aad ee gobolka Karkaar.
M/weyne Faroole oo shir xog warran & wadatashi ah la yeeshay Issimada beesha Absame ee ku sugan Nairobi.